Ityhile iposta yokuphehlelelwa Xiaomi Mi A3 | I-Androidsis
IXiaomi Mi A3 sele inomhla wokumiliselwa: IPoland inokuba lilizwe lokuqala ukuyifumana
El Xiaomi Mi A3 Sesona sixhobo esiye saphula kakhulu kwezi ntsuku zangoku. Ukufika kwayo, kunye neempawu zayo kunye nokuchazwa kwezobuchwephesha, kuye kwahletywa kakhulu, ke phantse naziphi na iindaba eziza kutyhilwa kumsitho wokuphehlelelwa kwazo azizukubangela mpembelelo. Izinto ezilindelweyo ezibekwe kuluhlu oluphakathi ziphezulu, kodwa zigubungela yonke into enokwenzeka.
Enkosi kuyo yonke idatha esiyiqokelele kule mobile, sinokuqinisekisa ukuba ukumiliselwa kwayo kuyakwenzeka kwiintsuku ezimbalwa okanye kwiiveki ezimbalwa, kodwa kwakule nyanga inye. Masikhumbule ukuba A2 yam yasungulwa nge-24 kaJulayi kunyaka ophelileyo, kwaye enkosi ipowusta entsha ekhutshwe yinkampani ngokwayo njengamaqebengwana ashushuIsixhobo kulindeleke ukuba sihambe ngokusesikweni emva kosuku olunye.
Njengoko besitshilo. IXiaomi Mi A3 izakuqalisa le Julayi 25 izayo. Phi? Ewe, kunyaka ophelileyo iSpain yayiyindawo ekhethwe yinkampani yaseTshayina yokutyhila iMi A2 kwihlabathi, kodwa ngoku iPoland ibonakala njengendawo yokuphehlelelwa kwesi sigxina sitsha nesikade silindelwe. Oku kuphakanyiswa yile poster ilandelayo isemthethweni ivezwe ngumenzi, apho ibhengeza ukuba umsitho uza kubanjelwa kwelo lizwe ngalo mhla ukhankanywe ngasentla.
Ipowusta yokuqalisa iXiaomi Mi A3
Kuphuhliso lwakutsha nje, Isithethi se-Xiaomi siveze ukuba ifowuni isemthethweni. Ukongeza kule teaser intsha, sele zikhona idatha ezininzi ezichaza oko inkampani sele ilungele abalandeli abayifunayo kakhulu. Yintoni esinokuyilindela kuye? Ewe, umyinge wexabiso lomgangatho apho ii-mobiles zorhwebo zihlala ziimpawu, kunye neenzuzo eziqhelekileyo zenqanaba, ezinokuthi zixhaswe Snapdragon 665 o 710Nangona ikwathiwa ukuba i-Snapdragon 730 inokuba kwisisu sayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IXiaomi Mi A3 sele inomhla wokumiliselwa: IPoland inokuba lilizwe lokuqala ukuyifumana
I-Huawei Mate 30 Pro ivele kwiifoto ezininzi zokwenyani